SAWIRRO: Madaxweynaha DDS oo Duq cusub u magacaabay magaalada Jigjiga, kana qaaday duqii hore. – Puntlandtimes
SAWIRRO: Madaxweynaha DDS oo Duq cusub u magacaabay magaalada Jigjiga, kana qaaday duqii hore.
JIGJIGA(P-TIMES)- Madaxweynaha Dawlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Maxamed Cumar ayaa xilkii ka qaaday Duqii uu dhawaan u magacaabay magaalada Jigjiga, waxaana lagu bedelay Duq cusub oo ay ansixiyeen guddiga Fulinta ee Xisbiga Soomaali Galbeed.
Madaxweynaha ayaa u magacaabay Dayib Muxumed Jaamac in uu noqdo Duqa cusub ee magaalada Jigjiga, isagoo bedelaya Cumar Garaad oo dhawaan xilkaas loo magacaabay, iyadoo tanni ay ka dhigan tahay isbedeladan muhiimka ah.
Qaar kamid ah saaxiibada Madaxweyne Cagjar ayaa ka carooday Xil ka qaadista lagu sameeyey Duqii dhawaan la magacaabay, balse dhaman Madaxweynaha ayaa ka laabtay wareegto uu ku magacaabi lahaa Qurbo-joog badan, waxaana diiday Dastuurka dalka Itoobiya.
Duqii hore ayaa la sheegay in uu haystay Baasaboor dal kale, taas oo keentay in uu waayo xilkiisa.
Xogtu waxay sheegaysaa in Mr, Dayib uu ahaa nin mudo dheer kusugnaa deegaanka, gaar ahaana Jigjiga, kaa soo badan wax kala socday isbedelada gobalku uu soo maray.
Caqabado waa weyn ayaa kuwareegsan maamulka cusub ee Soomaalida waxaana ka mid ah caqabado ka dhashay maamulkii hore tagidiisii iyo inta uu joogay oo ay wax badan ka qaldameen dhinaca Cadaaladda iyo garsoorka.